Yini umahluko phakathi isigqoko ibhayisikili futhi isikeyiti nesigqoko sokuvikela ikhanda? - Jomo Technology Co., Ltd
Umbuzo ovamile lapho abantu sizibuze wona yilona, 'Yini umehluko phakathi isigqoko ibhayisikili futhi isikeyiti nesigqoko sokuvikela ikhanda? "Ngaphandle umehluko asobala ukubukeka, ibhayisikili futhi isikeyiti nezigqoko empeleni ezisebenza ezahlukene ngezindlela eziningana, futhi ungathanda uqinisekise uma ukuthenga uhlobo olufanele nesigqoko sokuzivikela ngoba ugibele yakho skateboard kagesi .
Ungabona umehluko Ukusabalala phakathi njalo ibhayisikili nomakalabha futhi omunye owawenzelwa ukuvikela ngemuva ikhanda lakho. Image-credit: I Sweethome
Umehluko omkhulu phakathi ibhayisikili izigqoko kanye isikeyiti nezigqoko empeleni ezihlobene imiklamo yabo ahlukile. Skate nezigqoko, okuyizinto ngokuvamile round futhi abushelelezi, ukumboza ngemuva ikhanda lakho. Lokhu kungenxa yokuthi ziklanyelwe ukuvikela ekuweni ukuthi skateboarders ngokuvamile thatha, kungenzeka lapho ufike ngemuva kwekhanda labo. Ngokuphambene, Bikers ayivamile ukuwa ngemuva emabhayisikili yabo.
Ukuze uthole skateboarder kagesi , Ngingaluleka ukuthola esigqokweni ihlanganisa ngemuva ikhanda lakho like a bendabuko isikeyiti nangesigqoko enza. Ngenxa ibhodi yakho unekhono ukusheshisa ngokushesha, ungabekwa kokuwa nasemuva uma ukumahlulela kangakanani mpintsha ngabe isicelo.
Enye umehluko omkhulu phakathi ejwayelekile isikeyiti nangesigqoko nesigqoko ibhayisikili yikhono ukuvikela izinhlobo ezahlukene umthelela. Traditional, non-eqinisekisiwe, isikeyiti nezigqoko zenzelwe nge ethambile Foam igobolondo ukuthi zivikela imithelela ezincane eziningi. Ngokuphambene, isigqoko ibhayisikili senziwe a Foam kanzima EPS ukuthi yakhelwe ukuthatha umthelela esisodwa esikhulu futhi aphuke, ngemva kwalokho kudingeka esikhundleni nesigqoko sokuzivikela.
Nakuba yendabuko isikeyiti nezigqoko, eyenzelwe skateboard evamile futhi longboards Electric , bavame ukungamukelwa eqinisekisiwe, kufanele uthole isigqoko isikeyiti osebenzisa efanayo EPS kanzima Foam isigqoko ibhayisikili has, ukuthi namanje ivikela ngemuva ikhanda lakho. Ungakwazi kalula ukuthi iyiphi isikeyiti nezigqoko zenzelwe ngale ndlela ngokwenza isiqiniseko sokuthi basuke CPSC eqinisekisiwe.
Yini nangesigqoko okufanele ngiyithenge?
Konke nezigqoko Ngiye efakwe ohlwini e sekhanda lami Umhlahlandlela kukhona CPSC eqinisekisiwe futhi yakhelwe ukuvikela ngemuva ikhanda lakho. Uma nje ukuqinisekisa unayo isigqoko eqinisekisiwe ukuthi liphinde livikele ngemuva ikhanda lakho, uzobe kuphephe kakhulu ku yakho kagesi skateboar d.
isikhathi Iposi: Dec-11-2017